Logo Design ဝန်ဆောင်မှု - အရေးပါပုံ၊ ဆွဲပြီးလိုဂိုများ
Home » လိုဂို ဒီဇိုင်း (Logo Design) ဝန်ဆောင်မှု
Logo Design တစ်ခုရှိဖို့ တစ်ကယ်လိုရဲ့လား?
Logo Design ဆိုတာ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း ရဲ့ ခေါင်းစဉ်ခွဲတစ်ခုပါ။ လိုဂိုဆိုတာက ကိုယ့်လုပ်ငန်းကို အချိန်တိုင်း ကိုယ်စားပြုနေမှာမို့လို့ လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် လိုဂိုက အရေးအကြီးဆုံးပါပဲ။ လိုဂိုကိုမြင်တာနဲ့ ကုမ္ပဏီနာမည်ကို မှတ်ထားချင်စိတ်ပေါက်သွားဖို့က လိုဂိုရဲ့ အရေးအကြီးဆုံး တာဝန်ပါပဲ။
Logo design ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့ ဘာတွေလိုမလဲ? (ဆောင်ရန်)
ရှင်းလင်းရမယ် (မရှုပ်ထွေးမှ မှတ်မိလွယ်မယ်၊ Logo ပုံစံကို နှုတ်နဲ့ ပြန်ပြောဖို့လွယ်မယ်)
ဆန်းသစ်ရမယ် (ထူးဆန်းတာလေး တစ်ခုခုပါရမယ်)
သူများနဲ့ လုံးဝ (လုံးဝ) မတူရဘူး
ဒါတွေပြည့်စုံရင်တော့ Logo ကောင်းတစ်ခုလို့ အခြေခံအားဖြင့် ပြောလို့ရပါပြီ။
Myanmar Logo Designer တစ်ချို့ ဘာတွေမှားနေလဲ? (ရှောင်ရန်)
မှီငြမ်းတာများပြီး သူများနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ဖြစ်နေတာ
အလှဆင်တာများနေတာ (အရောင်သုံးတာများပြီး မလိုက်ဖက်တာ၊ ရှုပ်နေတာ)
အဆိုးဆုံးကတော့ ဘယ် designer ကိုမှမအပ်ဘဲ တွေ့ကရာ free logo တွေ download လုပ်ပြီး သုံးတာတို့ပါပဲ။
Free logo design တွေ download လုပ်ပြီးသုံးရင် ဘာဆိုးကျိုးတွေရှိမလဲ?
အကြီးမားဆုံး ဆိုးကျိုးကတော့ လူကြီးမင်းသုံးတဲ့ free logo ကို တစ်ခြားသူကလည်း လိုက်သုံးတဲ့အခါမျိုးပါပဲ။ ပိုဆိုးတာက အဲလိုလိုက်သုံးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကလည်း ကိုယ်နဲ့လုပ်ငန်းအမျိုးအစားတူနေတာပါ။ စဉ်းစားကြည့်ပါ လုပ်ငန်းတူမှလည်း သုံးတဲ့လိုဂိုက တူနိုင်ခြေရှိတာပါ။ ဒီလို လုပ်ငန်းလည်းတူ၊ လိုဂိုလည်းတူဆိုရင် ကိုယ့် customer ကလည်း ပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီကို ကိုယ့်ကုမ္ပဏီထင်ပြီး အလုပ်အပ်မိတာတွေ ရှိလာမှာပါ။ ဒီထက်ဆိုးတဲ့ ဆိုးကျိုးရှိပါဦးမလားဗျာ?
လူကြီးမင်းကိုယ်တိုင် ဒီဇိုင်နာနဲ့ စနစ်တကျဖန်တီးထားတဲ့ လိုဂို ဒီဇိုင်းကို ဘယ်ပြိုင်ဘက်လုပ်ငန်းကမှ လိုက်သုံးနိုင်စရာမရှိပါဘူး။ လိုက်သုံးရင်တောင် တရားဥပဒေအရ အရေးယူမှုတွေ လုပ်လို့ရပါတယ်။
ကျနော်တို့ Myanmar Web Designer မှာတော့ ဒီဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်တွေနဲ့ကိုက်တဲ့ လိုဂို ဒီဇိုင်းကောင်းတွေကို ကျွမ်းကျင်ပြီး၊ အတွေ့အကြုံများတဲ့ ဒီဇိုင်နာများက သေသပ်ကျနစွာ ဖန်တီးရေးဆွဲပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်ချမ်းသာမှုရစေဖို့ အာမခံပါတယ်။
MWD မှရေးဆွဲပေးပြီးသော လိုဂိုအချို့
လိုဂို အပ်သူများ ကြည့်ရန် »